म्याद सकिएको नारायणी पुल सर्वसाधारणले खचाखच, पुल चुनावी एजेण्डामा पर्ला त? « Name of Truth News : News Portal in Nepal
म्याद सकिएको नारायणी पुल सर्वसाधारणले खचाखच, पुल चुनावी एजेण्डामा पर्ला त?
प्रकाशित मिति : २०७८, मंसिर, १०, शुक्रबार १४:३०
भरतपुर, १० मंसिर
नेकपा एमालेको १०औँ अधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट चितवन आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि र सर्वसाधारणले नारायणगढ भरिभराउ भएको छ । यही क्रममा महाधिवेशन हेर्न आएका सर्वसाधारणको भिडले नरायणी नदीको पुल भरिएको छ । यो पुलको म्याद सकिइसकेको छ । म्याद सकिएको पुलमा क्षमताभन्दा बढी सर्वसाधारण पुग्दा जोखिम बढेको छ । यसलाई सर्वसाधारणले जोखिमपूर्ण मानेका छ।
नारायणाी नदीमाथिकाे याे पुल ४२० मिटर लामाे छ । याे पुल २०३७ सालमा निर्माण भएकाे थियाे ।
यो पुलको म्याद सकिएपछि यसअघि नै नयाँ सिग्नेचर पुल बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए । तर नेताहरूले यो पुललाई चुनावी एजेण्डा मात्रै बनाउँदै आएको सर्वसाधारणको आरोप छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएकाहरूले नारायणी किनारको नारायणगढतर्फको किनार लगभग भरिएको छ ।
यसैबीच झापा र कंचनपुरबाट महाधिवेशनका लागि हिडेका प्रतिनिधि र सर्वसाधारण अझै आइपुगेका छैनन् ।